ZTE Axon Elite, famakafakana sy hevitra | Androidsis
Zava-misy miharihary ny fiakaran'ny mpanamboatra sinoa. Ary ZTE dia iray amin'ireo goavambe Aziatika izay mandeha matanjaka any Eropa, mahazo alalana avy amin'i Huawei. Tamin'ny fotoana nanehoanay antsipiriany vitsivitsy momba ny fianakavian'i ZTE Axon vaovao, dia mitondra anao feno izahay izao ZTE Axon Elite famerenana, Sambo vaovao an'ny mpanamboatra ary misongadina amin'ny kalitaon'ny famaranana sy ny famolavolana tany.
Aza mino, eny, ity no telefaona avo lenta voalohany atolotry ny mpanamboatra. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy; Na dia hatramin'izao aza ny fitaovana ambony ZTE rehetra dia tsy avy any Shina, aryl ZTE Axon Elite dia misy eto amin'ny firenentsika ary io no iray amin'ireo avo lenta farany eo amin'ny tsena ankehitriny.
1 ZTE Axon Elite dia misongadina amin'ny famolavolana sahy
2 Toetra ara-teknika ZTE Axon Elite
3 Fampisehoana HD feno miaraka amin'ny tontonana avo lenta
4 Ny fiarovana dia tena hita ao amin'ny ZTE Axon Elite
5 Rindrambaiko izay tsy miankina amin'ny zava-bitany
6 Fakan-tsarimihetsika tsara ho an'ny terminal premium indrindra
6.1 Ohatra amin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny ZTE Axon Elite
ZTE Axon Elite dia misongadina amin'ny famolavolana sahy
Miaraka amin'ny fizarana famolavolana dia miditra amin'ny iray amin'ireo teboka mampiady hevitra indrindra amin'ity ZTE Axon Elite ity izahay. Efa nolazaiko anao fa ity telefaona ity, na tianao na mankahala ny endrik'izy ireo. Izay no nitranga tamiko.
Nasehoko tamin'ny telefaona ny telefaona ary tena samy hafa be ny fihetsik'izy ireo; raha ny sasany kosa tia ny famolavolana, ny hafa kosa tsy dia mifanentana ny fiolanan'ilay sainan'i ZTE vaovao.
Hanombohana ny ZTE Axon Elite tsy misy afa-tsy amin'ny loko volamena, filokana tena mampidi-doza. Na dia marina aza fa ny finday volamena dia tena lamaody eo amin'ny tsena Aziatika, amin'ny lafiny hafa amin'izao tontolo izao dia tsy mahomby izy ireo ary angamba mety tsara ny manolotra maodely samihafa. Ireo faritra hafa izay niteraka resabe indrindra dia ireo grilles roa eo aloha. Ny antsipiriany mahaliana dia ny hoe, na dia toa eo aza no misy ny sisiny, dia haingo tsotra fotsiny.
manokana Tiako io famolavolana io, na dia efa nolazaiko taminao aza fa ny olon-kafa mbola tsy tapitra ny fitiavany ireo grid ireo. Fa, toy ny mahazatra, momba ny tsiro ny loko. Ny zavatra tsara indrindra tokony hatao raha mieritreritra ny hividy ny ZTE Axon Elite ianao dia ny mankany amin'ny magazay ary mahazo azy.
Ny finday dia manana famaranana lehibe, noho izany vatana unibody izay manao chassis vy avo lenta. Na eo an-damosiny aza, izay miavaka ny kalitaon'ny telefaona, nanapa-kevitra ny ZTE fa hampiditra tarika plastika vita amin'ny hoditra sandoka, sahala amin'ny Note 3, izay nametrahany ireo antennas. Ny vokany? manapaka tanteraka ny estetika tonga lafatra amin'ny telefaona. Tsara kokoa raha nitady vahaolana hafa aho hanafenana ireo antennas nefa tsy very ny fandrakofana. Kapohy kely eo amin'ny famavanin-tanana ho an'ny mpanamboatra.
Raha tsy izany, ny famolavolana sy ny famaranana ny ZTE Axon Elite dia manatsara ny kalitao amin'ny mason-koditra rehetra. Any aoriana no ahitantsika ny mpamaky ny rantsan-tànana, miorina amin'ny toerana izay manamora ny fahaizako mampiasa azy. Misy ny olona maniry ny sensor biometrika eo aloha, fa tsara kokoa no ataoko ao ambadik'izany. Hoy aho, momba ny tsiro ...
ny ny zana-kazo eo aloha dia ampiasaina tsara, Na eo aza izany takelaka nolazaiko taminao izany dia mifandanja tsara ihany koa ny telefaona, misy refy sy lanjany izay ahazoana aina milamina. Asa lehibe avy amin'ny ZTE amin'ity lafiny ity.
Tena tsara ny fihazonana, na eo aza ny famaranana ny metaly. Tsy nisy fotoana nahatsapako fa hilatsaka ny telefaona, zavatra tiako. Ary farany, hitako fa milamina sy maharitra ny bokotra ao amin'ny ZTE Axon Elite. Tsy manisa ireo tariby plastika roa izay manahaka ny hoditra sandoka aho, mila milaza izany aho amin'ny ankapobeny, ny ZTE Axon Elite dia manolotra famolavolana famaranana sy famaranana mifanaraka amin'ny ambaratonga misy azy.
Toetra ara-teknika ZTE Axon Elite
lafiny X X 154 75 9.3 MG
Operating System Android 5.01 L
efijery IPS LCD 5.5 santimetatra 1920 × 1080 teboka (401dpi)
processeur Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 valo fotony (fotony efatra A-53 amin'ny 1.5 GHz ary cores 4 Cortex A-57 hafa amin'ny 2 GHz
Fakan-tsary aoriana 13 megapixels + 2 megapixels misy rafitra fakan-tsary roa / autofocus / detection face / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / Horonam-peo amin'ny kalitao 4K amin'ny 30fps
Fitaovana hafa Vatan'ny vy / sensor sensor / fantsom-pandehanana / gyroscope / rafitra famahana haingana
vidiny 450 euro
Araka ny efa nampoizina, ny ZTE Axon Elite dia terminal mahery tokoa izay afaka mamindra ny rindranasa na ny lalao video tsy misy olana, ho an'ny fitaky ny fitaovana maro izay mangataka fisaorana noho ny fikirakirana matanjaka sy ny GPU.
Ny iray amin'ireo zavatra nampatahotra ahy indrindra tamin'ity terminal ity dia ny olana mety hitranga. ZTE dia nanapa-kevitra ny hiloka amin'ny SoC mampiady hevitra an'i Qualcomm, ny Snapdragon 810. Na dia marina aza fa kinova nohatsaraina io dia tsy nanana na inona na inona niaraka tamiko aho.
Soa ihany fa noroahina ny tahotro rehetra, tsy nilaza izany intsony, rehefa nahita ny zava-bita tsara natolotry ny ZTE Axon Elite: nilalao lalao nandritra ny roa ora aho izay nitaky fampiasana mahery vaika ny finday rehetra ary Tsy nisy tsikaritro mihitsy ny fahatezeran'i ZTE Axon Elite noho izany ny asa hampangatsiahana ny terminal dia tena tsara.
Tsy nanana olana tamin'ny filokana na fijanonana aho na oviana na oviana, ny ZTE Axon Elite dia manolotra fampisehoana tena tsara ary arakaraka ny ambaratonga manodidina azy. Raha fintinina, raha natahotra ny zava-misy ianao fa ny ZTE flagship ankehitriny dia nampiasa ny Qualcomm Snapdragon 810 nampiady hevitra. processeur, afaka matoky ianao- Ny ZTE Axon Elite dia tsy manana olana manaparitaka, manome fahombiazana tena tsara.
Te hiresaka antsipiriany roa tena tiako momba an'ity telefaona ity koa aho. Amin'ny lafiny iray dia manana ny azy isika mpamaky ny rantsantanana, sensor biometrika iray izay miasa toy ny manintona manome fotoana fohy hamaliana.
Misy olona maniry bebe kokoa fa ny sensor sensor dia misy eo aloha fa hitako fa mahazo aina kokoa izy raha apetraka eo amin'ny tontonana aoriana, noho izany dia heveriko ho fahombiazana ny toeran'ny mpamaky biometrika an'ny ZTE Axon. Elite that koa, araka ny efa nanamarihako, Izy io dia miasa toy ny fahagagana arivo.
Ny antsipiriany hafa izay tiako dia ny kalitaon'ny feo. Mitandrema, ny grilles alohan'ny ZTE Axon Elite dia tsy ny mpandahateny, ny fitaovana dia manana mpandahateny tokana izay manome fampisehoana tsara, na dia tsy misy fanagejana be aza. Aiza no ahafahanao mahazo ny tratranao ZTE ary ny Axon Elite anao dia miaraka amin'ny kalitaon'ny audio rehefa mampifandray an-telefaona anao Rafitra Dolby, manolotra kalitaon'ny feo ambonimbony tokoa. Ireo mpitia mozika, amin'ity lafiny ity, ny ZTE Axon Elite dia tsy handiso fanantenana anao.
Fampisehoana HD feno miaraka amin'ny tontonana avo lenta
ZTE dia tsy te hiloka amin'ny tontonana QHD noho ny sainam-pireneny. Amin'izany fomba izany, na dia mahafoy kalitao kely aza izy ireo dia mahazo fampisehoana tsara, mampitombo ny fizakantenan'ny terminal. Y ny efijery an'ny ZTE Axon Elite dia tsy ratsy mihintsy.
Ary io ZTE Axon Elite io ve miakatra a 5.5 LCD IPS LCD tontonana, singa iray izay tsy fantatsika ny mpamatsy azy, fa manome kalitao tena tsara. Ny rafi-jiro backlighting dia manome famirapiratana tena tsara, mamela anao hahita ny efijery tsy misy zava-tsarotra na dia amin'ny andro tena milay aza, ary tsy mila mametraka ny famirapiratany hatramin'ny farany ambony indrindra!
Miaraka amin'ny hazavana manjavozavo, ny ZTE Axon Elite dia lasa mpiara-miasa lavorary ho an'ny mpamaky satria amin'ny alàlan'ny fampihenana ny famirapiratana ho faran'izay kely indrindra dia afaka mamaky isika nefa tsy manelingelina ny famirapiratan'ny efijery azy. Ny zoro fijery dia saika feno ary misy fatiantoka kely fotsiny amin'ny toerana tena tery, ankoatry ny fanomezana valinteny tsara dia tsara.
La somary mangatsiaka ny mari-pana ary mirona manga izany rehefa manandrana mahita fotsy madio isika, na dia amin'ny ankapobeny aza dia mitondra tena tsara; fifanoherana tsara sy karazana loko maranitra tena mazava izay manazava ny asa lehibe vitan'ny ZTE amin'ity fizarana ity. Raha fintinina, efijery Full HD miaraka 400 ppp izay manome fahombiazana tena tsara ary, aorian'ny fampiasana telo herinandro dia tsy diso ny hakitroky ny pixel ambonimbony kokoa aho.
Ny fiarovana dia tena hita ao amin'ny ZTE Axon Elite
ZTE dia te hisongadina eo amin'ny sehatry ny filaminana natokana ho an'ny mpampiasa ary ny ZTE Axon Elite dia ohatra mazava amin'izany. Hanombohana ny ZTE Axon Elite dia manana sensor momba ny dian-tànana izany, araka ny efa nolazaiko teo aloha, dia miasa toa ny landy mamela, ohatra, mamoha ny telefaona nefa tsy manindry ny bokotra herinaratra. Saingy tsy mijanona eo ilay zavatra.
Ankoatr'izay, ny Axon Elite dia manana Iris scanner. Ny fakantsary eo anoloana dia tompon'andraikitra amin'ny fahafantarana antsika sy ny famohana ny fitaovana. Sombiny mahaliana satria tsy misy terminal eo amin'ny tsena andrefana izay mampifangaro ity teknolojia ity amin'ny fomba namboarina, na dia eo aza ny fampiharana dia tsy dia ilaina loatra satria ela loatra ny fanekena ny dian-tànana, ankoatry ny olana misy amin'ireo mpampiasa manao solomaso. Ny zavatra mampahazo aina indrindra dia ny mandeha any amin'ny sensor-tànany mahery.
Ary farany, marihina fa ny ZTE Axon Elite koa dia manana rafitry ny fanekena feo, na dia efa nolazaiko taminao aza fa mbola miadana kokoa ny fahafantarana ny feontsika noho ny scanner iris, tsy lazaina intsony ny lesoka fanamarinana marobe ananany, noho izany dia safidy iray hafa izay liana kokoa noho ny mahasoa. Mazava ho azy, tsy misy maka ny trosa avy amin'ny ZTE, izay iray amin'ireo mpanamboatra izay miloka matanjaka indrindra amin'ity karazana haitao ity.
Rindrambaiko izay tsy miankina amin'ny zava-bitany
Amiko dia toa tsy azo avela heloka fa mbola miasa amin'ny Android Lollipop ny ZTE Axon Elite, bebe kokoa raha raisintsika ny telefaona izay. Ho fanampin'izay, ZTE dia nampiditra sosona namboarina niaraka tamin'io "vita sinoa" io: tsy misy mpantsaka fampiharana, menio azo ovaina ...
Ny olan'ny fahaizana manokana dia tiako be, tsy dia ilay habetsahan'ny fako izay mandeha ho azy amin'ny telefaona. Miresaka momba an'io bloatware sy rindranasa mahasosotra apetrak'ilay mpanamboatra sinoa io ary manome anjara biriky kely aho; Inona no mahatsara ny galerin-tsary na tranonkala fitetezana tranonkala izay azo antoka fa hahavita ratsy noho Chrome na Firefox?
Toy ny mahazatra tsy ny apps rehetra no azo esorina, na dia azontsika sakanana aza izy ireo mba tsy hanelingelina antsika. Ary ny tahiry 32 GB ho fanampin'ny slot micro SD card dia manome antoka fa tsy hanana olana amin'ny habakabaka ianao.
Fakan-tsarimihetsika tsara ho an'ny terminal premium indrindra
ZTE dia mitaky risika amin'ny fanomezana a rafitra efitrano roa ho an'ny sainam-pirenena vaovao. Efa nahita fanandramana sahala amin'izany izahay tao amin'ny HTC One M8, na dia tiako manokana aza ny valiny azo tamin'ny fakantsary aoriana an'ny ZTE Axon Elite.
Amin'ny tontolo ivelany mamirapiratra ny fakan-tsary dia manao asa lehibe misambotra antsipirihany misimisy sy manome fampisehoana avo dia avo. Toa mazava sy maranitra ny loko. Amin'ny toe-jiro maivana dia efa miova ny zavatra, mahita fa mijaly ny fakantsarin'i ZTE. Amin'ny tontolo misy faran'izay mahantra na tsy misy jiro, ny fakantsary Axon Elite dia mampihena ny kalitaony farafaharatsiny, toy ny ankamaroan'ny telefaona.
Ny teboka mahaliana indrindra amin'ny fakantsary roa an'ny ZTE Axon Elite dia miaraka amin'ny pmety hisambotra amin'ny bokeh vokeh, io fisafidianana voafantina io dia mampiavaka ny reflexes. Amin'ity tranga ity, ny ZTE Axon Elite dia mamorona sary tena mahomby, na dia miseho indraindray aza ny aberrations kely izay mandanja ny kalitaon'ny sary.
Te-hanasongadinana ny rindrambaiko fakan-tsary matanjaka aho. ZTE dia nampihatra fampiharana fakan-tsary ZTE Axon Elite tena feno: mampiasa tsara ny habaka, manolotra fidirana haingana sy mora amin'ny fomba samihafa, mamela ny fifehezana ny tanana ... raha fintinina, iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra hitako hatreto.
Ohatra amin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny ZTE Axon Elite
Ny ZTE Axon Elite dia manana bateria tsy azo esorina 3.000 mAh. Raha dinihina fa mampiditra efijery Full HD 5.5-inch sy SoC izay mampiasa loharano tena tsara dia tokony hanantena isika a fizakantena eo anelanelan'ny iray andro sy iray sy sasany: izany indrindra no naharetan'ilay telefaona tamiko.
Matetika aho no namidy azy io tamin'ny alina ka tsy nila nampifandraiko ny telefaona tamin'ny mitataovovonana, fa indroa aho te-hanamarina ny faharetan'ny bateria ary ny ZTE Axon Elite dia naharitra hatramin'ny 15:00. hariva na 16:00 hariva manomboka ny androko amin'ny 7:00 maraina ny andro teo aloha.
Asongadino fa ny ZTE Axon Elite manana rafitra famerana haingana hahafahantsika mameno ny antsasaky ny bateria ao anatin'ny antsasak'adiny. 35 minitra eo ho eo hahatratra 50% amin'ny fitsapana nataoko.
Asa mahafinaritra avy amin'ny ZTE mampiseho amin'ny Axon Elite fa vonona ny hanao ny dingana mankany amin'ny tsena eropeana avo lenta ny mpanao lamba. Heveriko fa misy pitsopitsony tokony hohafanaina, indrindra ny Android efa lany andro, na ny fako marobe amin'ny endrika fampiharana tonga am-boalohany, saingy mieritreritra aho fa nahavita asa lehibe ilay mpanamboatra aziatika.
Amin'ireo avo lenta farany ambany indrindra eny an-tsena
Mahatalanjona ny rindrambaiko fakantsary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » ZTE » ZTE Axon Elite, famakafakana ary hevitra
Mety misy manapotika ny endrik'ilay mpamorona ny sosona amin'ity terminal ity ve?
Samsung Pay dia ho tonga any Espana amin'ny 2 Jona